कसका लागि काँग्रेस ? | Ratopati
personडा. शोभाकर पराजुली exploreकाठमाडौं access_timeमाघ ५, २०७८ chat_bubble_outline0
कसैले पनि र स्वयं डा. कोइरालाले पनि के बिर्सनु हुँदैन भने उनी दलीय संरचनामा छायाँ सभापति हुन् । उनको गरिमा र भूमिका स्थापित गर्नमा सभापतिको पनि त्यत्तिकै भूमिका र जिम्मेवारी छ । स्वयं कोइरालाले पनि कुनै गुट वा समूहको नेता हुनुभन्दा नेपाली काँग्रेसको ‘‘म्यान अफ द एक्सन’’ को परिचय दिने बेला आइसकेको छ ।
कसैले पनि र स्वयं डा. कोइरालाले पनि के बिर्सनु हुँदैन भने उनी दलीय संरचनामा छायाँ सभापति हुन् । उनको गरिमा र भूमिका स्थापित गर्नमा सभापतिको पनि त्यत्तिकै भूमिका र जिम्मेवारी छ । स्वयं कोइरालाले पनि कुनै गुट वा समूहको नेता हुनुभन्दा नेपाली काँग्रेसको ‘‘म्यान अफ द एक्सन’’ को परिचय दिने बेला आइसकेको छ । नेपाली काँग्रेस सभापतीय पद्दतिले सञ्चालन हुँदै आएको पार्टी हो । त्यसैले डा. कोइरालाले काँग्रेसीजनको मर्म बुझ्ने र आम जनतासँग काँग्रेस छ भनेर देखाउने बेला यही हो । केन्द्रीय समितिमा बसेर पार्टी हाँक्नेहरु र केन्द्रीय समिति ताक्नेहरु दुवैथरीमा यस्तो आत्मसोच गर्नेहरु कति छन् नेपाली काँग्रेसमा ?